Indiana Qorshayaasha caafimaadka ee Medicaid Context link | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Indiana Qorshayaasha caafimaadka ee Medicaid Context link
Indiana, Waanu kaa daboolnay Context link
Caymiska wax kharash ah ku bixin ama kharashka jaban ee laga helo UnitedHealthcare Community Plan. Wax ka baro qorshooyinka caafimaadka Medicaid ee UnitedHealthcare ee aan ku bixinno Indiana. Context link
Dhammaan Hoosier-yada waxay mudan yihiin daryeel caafimaad oo la awoodi karo, oo aad ku jirto adiga. Context link Hadaanu nahay UnitedHealthcare Community Plan, waxaan ka caawinnaa dadka inay ku noolaadaan nolol caafimaad leh. Context link
Waxaan bixinaa qorshayaal badan oo lagu caawinayo Hoosiers si ay u caafimaad qabaan - oo ay caafimaad qab u ahaadaan. Context link Waxaanu cayminaa dadka waaweyn, dadka naafada ah, hooyada iyo carruurta la filaya ee ku JIRA qorshahayaga Hoosier Care Connect Medicaid. Context link
Eeg sababta Hoosier-yada ay u doortaan UnitedHealthcare Context link
Caymis kasta aad doorato, UnitedHealthcare ayaa kaa caawin doonta inaad hesho daryeelka aad u baahan tahay.
Bixiyeyaal badan oo shabakada oo kala duwan Context link
Daawooyinka dhakhtarku qoro oo wax kharash ah lagu bixin ama kharash jaban Context link
Booqashooyinka wanaagsan, tallaalada joogtada ah, dhacdooyinka caafimaadka bulshada iyo wax ka badan Context link
Adeegyada ilkaha iyo aragga Context link
Gaadiidka balamaha caafimaadka Context link
Ka daawo muuqaalka midig si aad wax badan uga ogaato UnitedHealthcare Community Plan ee Indiana. Context link
Qoraalka Fiidiyoowga Context link
Waa caafimaadkaaga. Context link Waa xulashadaada. Context link
Qof waliba wuxuu u qalmaa daryeel caafimaad oo la awoodi karo, oo aad ku jirto adigu. Context link
Dadka da'da ah, indhoolayaasha ah ama naafada ah iyo daryeelayaasha carruurta ku jira daryeelka korinta, waa inay eegaan UnitedHealthcare Community Plan. Context link
Waxaan haynaa manaafacaad barnaamij iyo waxyaabo dheeraad ah oo isbaddal dhab ah oo wanaagsan ku samayn kara noloshaada. Context link Waxaas oo idil oo wax kharash ah aan kuugu kacayn! Context link
Caymiska aragga Context link
Gaadiidka ballamaha caafimaadka iyo safarrada kale ee la oggolaaday Context link
24/7 Laynka Kalkaalisada ayaa ka jawaabaya su’aalahaaga caafimaadka Context link
Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad u baahato cawimaad yaroo dheeraad ah. Context link Hel waxyaabo dheeri ah oo aysan caymin Medicaid. Context link
Taageero go'an oo laga helo isla u doodaha Adeegyada Xubinta mar kasta oo aad na soo wacdo Context link
Xubin cusub ahaan, hel $50 kaadhka hadiyadda marka aad dhammaystirto qiimayntaada caafimaad Context link
Barnaamijkeena Jidkayga waxa uu bixiyaa talooyin waxtar leh oo loogu diyaargaroobo qaangaadhnimada Context link
Wax ka baro barnaamijyadayada gudbinta ee internet-ka jaban ama taleefanka gacanta ee bilaashka ah Context link
Waxaanu sidoo kale bixinaa agabyo kugu caawinaya inaad sida ugu wacan uga faaiideysato qorshahaaga. Context link
Keenista sonkorowga Context link
Booqashada wanaagsan iyo tallaalada
Adeegyada caafimaadka maskaxda iyo xanuunnada isticmaalka maandooriyaha
Booqo IN dot gov slash Medicaid wixii macluumaad dheeraad ah.
Waxaan kugu caawinaynaa sidii aad ugu noolaan lahayd nolol intii hore ka caafimaad badan. Context link
Waxaan halkan u joognaa waa adiga, Indiana. Context link
Xasuusnoow inaad xulato Qorshaha Bulshada ee UnitedHealthcare. Context link
Oo hel qorshaha kuu leh wax intii hore kabadan. Context link
Si aad wax badan uga ogaato Qorshaha Bulshada ee UnitedHealthcare, Context link
booqo UHCCommunityPlan dot com forward slash IN. Context link
Indiana Qorsheyaasha caafimaadka ee ugu yaraan dhan $0 oo kharash ah Context link
Qorshayaasha IN Medicaid: Context link
Kharash la'an- ama qiime jaban Context link
Shaqsiyaadka dakhligoogu uu hooseeyo Context link
Caruurta la koriyo iyo woodadka Gobolka Context link
Wax badan ogow Context link
Diyaar u ah inaad dalbato Context link
Barnaamijyada Sifaysan Context link
Medicaid: Context link Wax badan oo adiga kuu yala 2022 Context link
Xubin ka tirsan UnitedHealthcare IN Hoosier Care Connect ahaan, waxaad heli doontaa faa'iidooyin dheeraad ah oo qorshayaasha qaar aysan bixin. Context link
Hoosier Care Connect waa barnaamij u adeega xubnaha da'da ah, indhoolayaasha ama naafada, sidoo kale waxaa ku jira carruurta ku jirta daryeelka korinta iyo qaybaha Gobolka. Context link
Caawinta helitaanka adeegyada iyo taageerada Context link
Abaalmarinta xubinta ee helitaanka daryeelka aad u baahan tahay Context link
Beddelka bogsashada magdhow Context link
Barnaaamijyada waxtarka leh ee taleefankaaga ama kombiyuutarkaaga Context link
Barnaamijka u dhigma dugsiga sare
Cuntooyinka hooyada, ayaa laguugu keenay gurigaaga
U gudbinta ilaha internetka ee qiimaha jaban
U gudbinta Adeegga taleefanka gacanta ee bilaashka ah Context link
Tallaabooyinka Koowaad ee Caafimaadka leh, barnaamij loogu talagalay hooyooyinka uurka leh iyo dhallaankooda
24/7 helitaanka kalkaalisada ama dhakhtarka Context link
Qorshaha IN Medicaid Context link
Waxaad yeelan doontaa bixiye caafimaad oo aasaasiga ah (PMP) kaas oo noqon doona dhakhtarkaaga ugu weyn. Context link PMP gaaga waa qofka aad u aragto daryeelkaaga intiisa badan. Context link Tan waxaa ku jira baaritaanno, daweyn, tallaallo, dhaawacyo fudud iyo arrimo caafimaad. Context link Kala hadal PMP kaaga wixii walaacyo kale ah ee aad qabtid. Context link PMP-gaaga ayaa kaa caawin kara inaad go'aansato fursadaha kugu habboon. Context link
PMP-gaaga ayaa ah dhakhtarkaaga ugu muhiimsan: Context link
Daryeelka ka-hortagga ah sida baaritaannada, baarista kansarka iyo tallaallada Context link
Daawaynta haddii aad jiran tahay ama aad dhaawacantay Context link
U gudbinta dhakhaatiirta takhasuska leh ee xaaladaha qaarkood Context link
Isticmaal Qalabka Raadinta Dhakhtarka si aad u aragto in dhakhtarkaagu ku jiro shabakadeena. Context link Haddii aanad lahayn PMP ama haddii dhakhtarkaagu aanu ku jirin shabakadayada, waxaanu kaa caawin karnaa inaad hesho mid cusub oo kuu dhow. Context link Waad beddeli kartaa PMP-gaaga wakhti kasta. Context link
Booqashooyinka tooska ah Context link
Mar walba ma fududo inaad shakhsiyan u booqato dhakhtarka. Booqashooyinka tooska ah (ama telehealth) waxay kuu oggolaanayaan inaad la hadasho dhakhtarkaaga 24/7 adoo isticmaalaya kumbuyuutarkaaga, tablet-kaaga ama talefoonkaaga casriga ah. Context link Daryeelka caafimaadka ee fog (Telehealth) waa ikhtiyaar wanaagsan oo lagu daaweeyo xaaladaha caadiga ah ee u baahan daawaynta caadiga ah. Waa kuwaan tusaalayaal:
Riiraxyada, hargabka, iyo qandhada
Qufaca, jir xanuunka, iyo cune xanuunka
Xasaasiyada, firiirica, iyo cuncunka
U doodaha Adeegyada Xubinta Context link
Maaraynta daryeelkaaga caafimaad oo keliya ayaa noqon kara mid adag, gaar ahaan haddii aad la tacaalayso dhibaatooyin caafimaad oo badan isku mar. Context link Haddii aad u baahan tahay taageero dheeraad ah si aad u hesho oo aad caafimaad u qabto, waan ku caawin karnaa. Context link Dhammaan xubnahayaga Hoosier Care Connect waxay heli karaan u doodaha Adeegga Xubinta. U doodaha Adeegyada Xubinta ayaa ku caawin kara: Context link
Fahamka barnaamijka Hoosier Care Connect program Context link
Raadinta dhakhtar, dhakhtarka ilkaha ama dhakhtarka indhaha Context link
Sharax faa'iidooyinkaaga iyo caymiskaaga Context link
Kaala hadlidda barnaamijyada gaarka ah ee aad diyaar u tahay Context link
Kaa caawinta inaad hesho agab qaabka aad doorbidayso (Braille, far waaweyn, faylka maqalka) Context link
Kugu xiridda maamulaha daryeelka haddii loo baahdo Context link
Helidda ilo kuu dhow si ay kaaga caawiyaan dhibaatooyinka kale sida cuntada, guriyeynta, gaadiidka, shaqada, dareemo badbaado ama waxbarasho Context link
Haddii aad u baahan tahay gaadiid, macaashyadaada waxaa ka mid ah gaadiid-raac. Waxaa laga yaabaa inaad haysato $1 koobi ah safar kasta oo hal-gees ah. Context link Waxaan daboolnaa safarrada lagu aado:
Balamaha caafimaadka Context link
Balamaha tallaalka Context link
Farmashiyeyaasha (marka warqad dhakhtar la dalbado inta lagu jiro booqasho) Context link
Qolka cuntada Context link
Ballamaha u-qalmida Medicaid
Kulamada Golaha La-talinta Xubinta Context link
Baabuurta leh rakada gure-guraha ayaa diyaar ah haddii loo baahdo. Waxa sidoo kale aad u qalmi kartaa kaarka baska ama lacag-celinta la raacida baabuur saaxiibada iyo qoyska.
24-saac. Context link Nurseline
La hadal kalkaalisada diiwaangashan wakhti kasta 24/7 si aad jawaabaha ugu hesho su'aal ama walaac kasta oo la xiriira caafimaadka. Context link
Dhageyso astaamaha Context link
Kaa caawinta is-daryeelka Context link
Kaala talin doonaan ku helida daryeel booqashada dhakhtarka ama xarunta daryeelka degdegga ah. Context link
Kaa caawin doonaan inaad ogaato goorta aad aadi doonto qolka gargaarka degdega ah.Context link
Booqashooyinka wanaagsan ee dhakhtarkaaga ayaa kaa caawin kara inaad caafimaad qabtid. Booqashooyinkani waxay ku dhici karaan dhibaatooyin caafimaad goor hore, si loo daweeyo. Context link Waa inaad aragto PMP-gaaga sannad kasta si aad si fiican u hubiso, xitaa haddii aadan xanuunsanayn ama calaamadahaaga la xakameynayo. Context link Adeegyada ka hortagga waxaa ka mid ah: Context link
Baaritaannada dadka waaweyn iyo carruurta Context link
Daryeelka ilmaha wanaagsanContext link
Daryeelka haweenka uurka leh Context link
Tallaabooyinka joogtada ah iyo tijaabooyinka Context link
Maamogiraam Context link
Ma jirto wax lacag bixin ah oo loogu talagalay daryeelka ka hortagga
Joojinta sigaarka ama dhuuqida sigaarka electroniga ah Context link
Joojintu way adag tahay, balse waan kaa caawin karnaa. Ma ogtahay in 20 Daqiiqado kadib markaad joojiso dhuuqida, garaaca wadnahaagu inuu hoos ugu dhacayo heerka caadiga ah? Context link Iyo 24 saacad gudaheeda kadib markaad joojiso heerka kaarboonmoonoksaydh dhiigaaga ayaa caadi ku soo noqonayo.
Kala hadal dhakhtarkaaga wax ku saabsan joojinta. Ama wac 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) si aad u hesho tababaro bilaash ah, la-talin iyo agab kaa caawinaya joojinta. Context link
Abaalmarinta Xubinta UnitedHealthcare Context link
Samaynta waxyaabaha fudud ee caafimaadkaaga u wanaagsan waxay mudan tahay abaal-marin. Context link Taasi waa waxa aad ku heli Abaalmarinta Xubinta ee UnitedHealthcare. Context link Ka xubinta Xiriirka Daryeelka Hoosier ahaan, waxaad u heli kartaa kaadhka hadyada: Context link
Kaarka hadiyadda oo hal mar ah ee dhammaystirka xog-uruurinta baahiyahaaga Caafimaad maalmaha 90 gudahooda Context link
Kaarka hadiyadda sannadlaha ah ee booqashada ilmaha wanaagsan ama daryeelka wanaagsan ee qaan-gaarka 3 ilaa 21 sano jir Context link
Kaadhka hadiyadda ee baadhista hogaamin (ka yar da'da 2)
Kaarka hadiyadda sannadlaha ah ee booqashada ilkaha ee kuwa 2-20 sano jirada Context link
Kaarka hadiyadda ee wakhtiga ku habboon ee daba-galka ka dib cusbitaalka marka la seexiyay isticmaalka khamriga iyo maandooriyaha kale awgeed Context link
Wax ka baro noocyada qorshaha Context link
Qorshayaasha Medicaid Context link
Indiana Medicaid (Hooseer Care Connect) waa caymis caafimaad oo loogu talagalay dadka dakhligoodu hooseeyo. Context link Waxaa laga yaabaa inaad ku heli karto Medicaid gudaha Indiana haddii aad uur leedahay, carruur leedahay ama aad leedahay naafo. Context link Xaaladaha qaarkood, dadka waaweyn ee kale ayaa sidoo kale laga yaabaa inay u qalmaan. Context link
Arag qorshayaasha gudaha Indiana Context link (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 06.14.2022 waqtiga 12:48 GALABNIMO CDT